कानुनी कुरा Archives - Vishwa News
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतम तत्काल मन्त्री बन्न नसक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उनी हालै राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्त भएका थिए । उनका सांसद पद भने यथास्थितिमै रहने छ । गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन
मल नल्याएका कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस, कारवाही रोक्न अदालतको आदेश
काठमाडौं । सरकारसँग गरेको सम्झौता अनुसार मल ल्याउन नसकेका दुई कम्पनीमाथि सरकारले कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । उता, उच्च अदालत पाटनले भने कारवाही तत्कालका लागि अगाडी नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सम्झौता बमोजिम युरिया मल ल्याउन
खोटाङ । मानिसले पैसाका लागि के सम्म गर्न सक्ला ? त्यो पनि कति रुपैयाँका लागि ? नेपालमा एक व्यक्तिले मात्र १ हजार रुपैयाँ सापटी नदिएको झोँकमा आफ्नो हजुरबुबा उमेरका वृद्धवृद्धाको हत्या गरेको खुलेको छ । खोटाङ, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका–४ डम्बर्खुशिवालयमा दुई
ललितपुर । ललितपुरस्थित अल्का अस्पतालमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीको हत्या भएको छ । अस्पतालमा कार्यरत ३९ वर्षीय गीता केसीको हत्या भएको हो । प्रहरीका अनुसार उनको शव गोदावारी नगरपालिका–१०, मुलडोलमा पर्ने लेलेको जंगलमा फेला परेको छ । प्रहरीले हत्यामा संलग्न
लागुऔषध कारोबारीलाई पक्रन रुकुममा प्रहरीले चलायो गोली
मुसिकोट । रुकुमपश्चिममा प्रहरीले दुई व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने क्रममा गोली चलाएको छ । दुई लागुऔषध कारोबारीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले गोली चलाएको पुष्टी गरेको छ । मुसीकोट नगरपालिका–४ ठाराढुंगाबाट प्रहरीले गोली प्रहार गरी दुई जनालाई पक्रेको हो । गोली प्रहारबाट एकजना
काठमाडौंमा युवतीमाथि एसिड हान्ने दुई जना थुनामा
काठमाडौं । काठमाडौंको सीतापाइलामा युवतीमाथि एसिड प्रहार गर्ने दुई जनालाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले बिहीवार उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश कृष्णजंग शाहको इजलासले अभियुक्त मोहम्मद आलम
काठमाडौं उपत्यकामा भोली रातीबाट निषेधाज्ञा, कुनकुन गतिविधिमा प्रतिवन्ध ?
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी भएको छ । एक सातासम्म लागु हुने गरी तीन वटै जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू भएको हो । यस्तो प्रतिवन्ध बुधबार राती १२ बजेबाट लागु हुनेछ । यस्तो निर्णय १० भदौसम्म कायम रहनेछ । अहिले काठमाडौं
आर्थिक नियमिततामा मुछिएका तीन सैनिक अधिकृत बर्खास्त
काठमाडौं । नेपाली सेनाले आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका आफ्ना तीन अधिकारीलाई बर्खास्त गरेको छ । सैनिक अदालतबाट दोषी ठहरिएका तीन जना अधिकारी सैनिक सेवाबाट बर्खास्त भएको सेनाले जनाएको छ । उनीहरुलाई सम्पत्ति र अनुशासन तथा आचरणसम्बन्धी कसुरमा सेनाले कारवाही गरेको हो
काठमाडौं । गोंगबुमा आइतबार बिहान विभत्स अवस्थामा टाउको र खुट्टा काटिएको अवस्थामा फेला परेको शवको पहिचान भएको छ । उनी दाङका कृष्णबहादुर बोहरा भएको प्रहरीले पुष्टी गरेको छ । यसअघि शवको पहिचान हुन नसकेपछि सोमबार दिउँसो प्रहरीले उनको तस्वीर सार्वजनिक
काठमाडौं । आफ्नो फैसलामाथि भएको सार्वजनिक टिकाटिप्पणी प्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले असन्तुष्टी व्यक्त गरेको छ । खासगरी रन्जन कोइरालामाथिको फैसलामा चित्त नबुझाई आम मानिसले सर्वोच्चको फैसलामाथि चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय भएका विवादित फैसलामाथि प्रश्न उठाएकोमा
July 27, 2020 विस्तृतमा »
कोइरालाको मुद्दामा परेको पुनरावलोकन निवेदनमाथि आज सुनुवाई
काठाडौं । पत्नी हत्या गरी अपराध लुकाउन जंगलमा लगी शव जलाएको प्रमाणित भएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई जेलबाट छुटाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला उपर परेको पुनरावलोकन निवेदनमाथि आज सुनुवाई हुँदैछ । सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी
‘न्याय मूर्तीको एक फैसलामाथि प्रश्न उठेको दिन’
काठमाडौं । आज सर्वोच्चको एक फैसला कार्यान्वयनप्रति आम मानिस संतुष्ट छैनन् । सामाजिक संजालदेखि चिया पसलसम्म न्यायालयमाथि प्रश्न उठ्ने गरी सर्वोच्चबाट भएको एक फैसला कार्यान्वयनमा आएको छ । पत्नी हत्याको अभियोगमा ८ वर्ष जेल बसेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआइजी रन्जन कोइरालालाई
हेटौडा । दुई साता अगाडी मकवानपुरस्थित आफ्नै घरको भान्सा कोठामा मृत भेटिएकी सुस्मिता थापाको घरकै परिवारबाट क्रुर हत्या भएको खुलेको छ । परिवारका सदस्यको मिलेमतोमा हत्या भएको प्रहरीले सोमबार जानकारी गराएको छ । प्रहरीले दुई साता लामो अनुसन्धानपछि मकवानपुरबाट सुस्मिताका
June 29, 2020 विस्तृतमा »
रुकुम । रुकुम पश्चिमस्थित चौरजहारी नगरपालिका, सोती गाउँमा भएको नरसंहारमा आरोपित २३ जना पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । जिल्ला अदालत रुकुमले जेठ १० मा ६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनाका अभियुक्तमध्ये २३ जनालाई कारागार चलान गर्ने आदेश
June 24, 2020 विस्तृतमा »